बैंक-银行 - China Radio International
(GMT+08:00) 2016-03-11 13:40:51
यस हप्ताको चर्चित शब्द बैंकसँग सम्बन्धित रहेको छ। बैंकलाई चिनियाँ भाषामा यिन हाङ भनिन्छ । फेरि एक पटक ：यिन हाङ । यिन हाङ । बैंक भनेको चिनियाँ भाषामा यिन हाङ । हामीले पैसा सम्बन्धित काम बैंकमा गर्छौँ।
चीनमा धेरै बैंकहरु छन्। यो भनेको चोङ गो यौ हन त्व यिन हाङ। अर्थात् चिनियाँमा चीनमा धेरै बैंकहरु छन् भन्नलाई चोङ गो यौ हन त्व यिन हाङ भन्नुपर्छ। फेरि एक चोटी भन्नुहोस। चोङ गो यौ हन त्व यिन हाङ।
चीनको केन्द्रिय बैक चिनियाँ जन बैंक हो। यसलाई चिनियाँ भाषामा चोङ गो रेन मिन यिन हाङ भनिन्छ । चोङ गो रेन मिन यिन हाङ। फेरि एक चोटी भन्नुहोस । चीनको केन्द्रिय बैंक चिनियाँ जन बैंक हो। यसलाई चिनियाँ भाषामा चोङ गो रेन मिन यिन हाङ भनिन्छ । चीनको जन बैंकलाई चिनियाँ भाषामा के भनिन्छ, के त्यो तपाईँहरुले मनमा राख्नुभयो ? मसँग एउटा प्रश्न छ। चीनको जन बैंकलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने ?
चीनको जन बैंक बाहेक चीनमा चिनियाँ कृषि बैंक पनि छ। चिनियाँ भाषामा चिनियाँ कृषि बैंकलाई चोङ गो नङ ये यीन हाङ भनिन्छ। चोङ गो नङ ये यीन हाङ। त्यसै गरी चिनियाँ उद्योग र वाणिज्य बैंक पनि छ। यसलाई चिनियाँ भाषामा चोङ गो कोङ शाङ यिन हाङ भनिन्छ । चोङ गो कोङ शाङ यिन हाङ। चिनियाँ उद्योग र वाणिज्य बैक भनेको चोङ गो कोङ शाङ यिन हाङ हो। चीनको निर्माण बैंक भनेको चोङ गो च्येन श यीन हाङ हो। चोङ गो च्येन श यीन हाङ। चीनको निर्माण बैंक भनेको चोङ गो च्येन श यीन हाङ हो।
हामीले बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेलाई छुन छ्यान भनिन्छ। छुन छ्यान। छुन छ्यान। हामीले बैंकमा पैसा राख्नेलाई छुन छ्यान भनिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ छ्यान भनेको पैसा हो। अनि हामीले बैंकबाट पैसा झिक्ने भनेको छ्यु छयान हो। छ्यु छयान। छ्यु छयान। हामीले बैंकबाट पैसा झिक्ने भनेको छ्यु छयान र पैसा जम्मा गर्नेलाई छुन छ्यान भनिन्छ। छुन भनेको राख्नु या जम्मा गर्नु हो भने छ्यु भनेको झिक्नु या निकाल्नु हो।